Palestiniana Roa Voafonja Teo Aloha No Voalohany Nanokatra Kamiao Kely Fivarotan-tsakafo Ao Ramallah · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2016 10:19 GMT
Khaldoun Barghouti, ilay voafonja taloha lasa mpandraharaha , mivarotra mofo sesika misy akoho ho an'ny zazalahy mpanjifa iray ao an-tanànan'i Ramallah Morondrano Andrefana. Sary: Dalia Hatuqa
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 21 Septambra 2016 ity lahatsoratra avy amin'i Dalia Hatuqa ity. Ary naverina navoaka eto indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Midedadeda ny masoandro ao afovoan-tanàn'i Ramallah, ilay toerana mitàna ny renivohitra Palestiniana. Fara fahakeliny 90 degre (F?) ny ao an-tsenan'ny voankazo sy legioma , kanefa tsy manakana ny olona tsy handeha hiantsena izany .
“10 sekely ny voatabia dimy ” hoy ny mpivarotra iray miantsoantso – eo amin'ny 3 $ eo izany .
Ao anatin'ny kotaba sy ny olona maro misomebiseby, tonga ny kamiao kely iray miloko volomparasy, mena sy maitso. Nikorisa nisokatra ny varavarankely fivarotana ary nanomboka niasa ny lehilahy roa tao anatiny. Nanomboka nikarakara ny milina fanendasana ny iray, raha nandidy ireo mofo ny iray hafa.
Fantatra amin'ny anarana Arabo hoe “Qitar Ata'am” izay midika hoe “Ny Fiaran'ny Sakafo” izany .
Mitovy amin’ ireo kamiao kely eny an-dalamben'ny tanàna maro any Etazonia ilay kamiao kely fivarotan-tsakafo voalohany ao Ramallah.
I Khaldun Barghouti sy i Abdelrahman Bibi no namoaka ilay kamiao kely, lehilahy roa nandia folo taona tany amin'ny fonja Israeliana, noho ny fiarahan'izy ireo tamin'ny vondrona voarara. Nieritreritra lalina sy mafy ny amin'ny fomba atao hivelomana indray raha vao mivoaka ny fonja izy ireo nandritra ny fotoana tany am-ponja .
Vehivavy Palestiniana mandalo ny “Qitar Ata'am”, izay midika hoe “ny Fiaran'ny Sakafo,” ny kamiao kely fivarotan-tsakafo voalohany ao Ramallah. Sary: Dalia Hatuqa
“Tsy te-ho enta-mavesatra ho an'ny fiaraha-monina ireo gadra ,” hoy i Barghouti, izay nianatra momba ny teknolojia vaovao, ny tantara sy ny haivarotra, na tao anatiny na tao ivelan'ny fonja. “Te hanomboka fihariana tsy ao anaty rindrina izahay, izany hoe , zavatra iray izay manome anay fahalalahana mivezivezy.”
Saika ny zava-drehetra momba ny kamiao kely fivarotan-tsakafo dia avy amin'ny aingam-panahin'ireo lehilahy nandritra ny fotoana naha-tany am-ponja azy ireo, hoy i Barghouti. Nolokoiny loko mazava ny kamiao kely mba hanana endrika mifanohitra amin'ny fiainana maloka tany am-ponja. Ahitana fangarona lamàtra sy katsaka toy ny hitany tany am-ponja ny sakafo ary novaina ho sakafo voakarakara kokoa .
“Matetika izahay no manao mofo voasesika akoho shawarma, akoho schnitzel, hamburger sy saosisy,” hoy i Barghouti.
Mipetraka eo amin'ny farany ambony ny mofo voasesika rehetra miaraka amin'ny ovy endasina maro sy legioma voatetika madinika, norarahana saosy tahini na saosy tongolo gasy izany.
Maro ireo fivarotan-tsakafo maivana amin'ny trano manerana ny tanàna Palestiniana, fa tena zava-baovao eto ny fivarotan-tsakafo mandehandeha amin'ny kamiao kely. Namorona karazana fahazoan-dalana vaovao hanaovana ilay raharaham-barotra ny Minisiteran'ny Fitaterana. Ary tsy mijanona hatreo ny fanamby.
“Ny mitady herinaratra no henjana indrindra”, hoy i Bibi, 35 taona. “Manelingelina sy maimbo ny gropy mandeha amin'ny solika ampiasainay amin'ny herinaratra . Noho izany nikaroka ny fomba ataon'ireo kamiao kely mpivarotra sakafo hafa izahay ary nahita vahaolana maitso (manaja tontolo iainana). “
Orinasa Palestiniana no nametraka takela-masoandro efatra lehibe teo amin'ny tafon'ny kamiao kely, izay ampy amin'ny fanomezana herinaratra mba handefasana ny vata fampangatsiahana kely, ny fikopakopahan-drivotra ary ny vata fampangatsiahana fandranty sakafo ety ivelany.
Nahasarika saina maro hatreto ny kamiao kely sy ny marika takela-masoandro, ary mpanjifa tsy tapaka.
“Amelao mofo sesika saosisy aho”, hoy i Rami, 14 taona ao an-toerana .
“Tiako ilay hevitra fampiasana ny angovon'ny masoandro” hoy izy. “Tena tsara!”
Nanao antoka lehibe i Barghouti sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny hevitra kamiao kely fivarotan-tsakafo. Nindram-bola 37.000 $ izy ireo, izay ho averina ao anatin'ny dimy taona, ary nanome azy zanabola ambany manokana ny banky noho ny maha-voafonja azy ireo teo aloha.
“Namboarina ho an'ny kamiao kely ny zava-drehetra: ireo karazana vata fampangatsiahana, sy ny milina fanendasana,” hoy i Barghouti. ” Raha tsy diso aho, ny antsy ihany no hany zavatra novidina avy any amin'ny fivarotana .”
Vetivety dia efa nahita marika fahombiazana i Barghouti, izay manan-janaka enina, sy Bibi, izay nanambady vao haingana. Maro ny olona – anisan'izany ireo voafonja teo aloha hafa- no nangataka ny toro-hevitr'izy ireo momba ny nanombohany ny kamiao kely fivarotan-tsakafo, ary nisy ny feo mandeha fa misy iray hafa misokatra any Gaza.
“Te hahalala fotsiny momba ny kamiao kely fivarotan-tsakafo ny olona tamin'ny voalohany”, hoy i Barghouthi, sady nandraraka fangarony tamin'ny mofo sesika saosisy .
” Te-hanohana anay ny olona satria gadra afaka izahay,” hoy izy. “Fa ankehitriny, tonga izy ireo noho ny sakafo.”